အောင်မြင်ဖို့ – အောင်မြင်သူတွေကို Role Model စံပြထားစေပါ -
Posted by LinMyat Ko
Jack Ma မအောင်မြင်ခင် (KFC) မှာ အလုပ်လျှောက်ခဲ့တယ်။
သို့သော် ခုအချိန်မှာ Jack Ma ဟာ ဘီလျံနာ သန်းကြွယ်ဌေးကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ဘီလျံဖြစ်မဲ့သူက ဘာကြောင့် KFC မှာ အလုပ်လျှောက်ခဲ့လဲဆိုတာ
(Jack Ma ဘီလျံနာ) ဆိုတာကို (Jack Ma) ကိုယ်တိုင် မသိခဲ့ခြင်းကြောင့်ပါပဲ။
အောင်မြင်ဖို့ ကိုယ်သိတဲ့ နယ်ပယ်ကို မရှာဖွေပါနဲ့
ကိုယ်မသိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်တွေကို ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာ Jack Ma ဟာ သူကိုယ်တိုင် ဘီလျံနာဖြစ်ဖို့ (ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခဲ့နိုင်ပြီ) တကယ်တော့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ Jack Ma (KFC) ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ Jack Ma (ဘီလျံနာဘဝ) ဆိုတဲ့ (ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ You Don’t Know အဖြေကိုသိသွားခြင်းပါပဲ)
ဘဝမှာလက်တွေ့အောင်မြင်ရေးဆိုတာ လက်တွေ့အောင်မြင်သူတွေမှာ ပိုပြီးရှိနေပါတယ်။ အောင်မြင်ပြီးသားသူတွေမှာ အောင်မြင်နည်းတွေရှိနေပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေကြိုးစားသလို ကြိုးစားတဲ့အခါ တနေ့အောင်မြင်မှာ ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်
တနေ့တော့ အောင်မြင်လာမှာပါ။ အသေအချာပါပဲ။
လူတစ်ဦးကိုလွမ်းမိုးစေတာ သူလေးစားအားကျရတဲ့သူတွေပါ။ သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲတိုးတက်စေတဲ့ လေးစားအားကျသူတွေကို အတုယူကြိုးစားပါလို့ အားပေးချင်ပါတယ်။
Who I am? ငါဟာ ဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲ?
ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ အရာတစ်ခုမှာ အဖြေများစွာရှိနေဖို့ ယုံကြည်လိုက်ပါ။
သင်ဟာ တစ်စုံတရာကို ဖန်တီးနိုင်သူအဖြစ် ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ပါ၊ Everything is Inside Me (အရာအားလုံးဟာ ကိုယ်အထဲသန္တန်မှာ အဖြေရှိနေမှာပါ)
Leader are Learner ဦးဆောင်သူဟာ လေ့လာနေသူပါ။
Learn from Leader ဦးဆောင်နေသူတွေထံမှ လေ့လာပါ။
တခြားသူတွေ အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အောင်မြင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတော့ရှိနေမှာပါ ရှာဖွေနေရင်း I am Millionaire မီလျံနာဖြစ်တဲ့တနေ့ အားလုံးအတွက် Business Millionaire သင်တန်းနဲ့ Mentor အဖြစ် အကြံပေးအားပေးနေပါရစေ။
ဘဝမှာ လေးစားရတဲ့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် (၁) Tony Robbin နဲ့ ကမ္ဘာကျော် Jack Ma တို့ရဲ့ ခံယူစိတ်တွေ မဟာဗျူဟာတွေ ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မသိတဲ့ အနာဂတ် အတွက်အဖြေရှာနေရင်း
လေးစားရတဲ့ Tony & Jack Ma